Ny tsy fahazoan-dàlana
Fanandratana ny feo
an'ny Mpanavao antsika amin'ny ho avy
Antso avy amin'ny vahoaka
Ny unCommission dia fahafahana lehibe, isan-karazany ary andraisan'ireo tanora 600 ny traikefany mba hamantarana ireo fiheverana vonona amin'ny asa ho an'ny hoavin'ny fianarana sy ny fahafahana STEM.
Avy amin'ireo tantara ireo, hevitra telo no nipoitra izay manondro ny lalana mankany amin'ny fanatrarana ny fanabeazana STEM ara-drariny ho an'ny ankizy rehetra eto amin'ny firenentsika, indrindra ho an'ny vondrom-piarahamonina Black, Latinx ary Native American.
Tsy nilavo lefona ny tanora; reraka izy ireo ary te hanova ny STEM.
Tena zava-dehibe ho an'ny tanora ny mahatsapa ny maha-izy azy ao amin'ny STEM.
Ny mpampianatra no hery matanjaka indrindra amin'ny fampivoarana ny maha-izy azy ao amin'ny STEM.
ZAVA-DEHIBE AO AMIN'NY FAHASALAMANA
MPITONDRA TANTARA TSY MISY
Taona (taona antonony)
Olona manana loko
Vehivavy na tsy binary
an'ireo mpitantara re avy amin'ny a
olon-dehibe manohana ny tantaran'izy ireo
Etazonia, anisan'izany i Washington, DC
Henoy ny tantarany
NY LALANA MIALOHA
Mitarika ny hevitra avy amin'ireo mpitantara tsy miankina aminay 100Kin10's dingana maharitra folo taona manaraka mba hamoahana ireo taranaka mpanavao sy mamaha olana. 100Kin10, izay nanomboka tamin'ny 2011 ho setrin'ny Ny antson'ny filoha Obama ho an'ny mpampianatra STEM vaovao 100,000 XNUMX vaovao tsara ao anatin'ny folo taona ary nihoatra io tanjona io tamin'ny 2021, miandrandra ny handray izay mipoitra avy amin'ny tsy kaomisiona ho tanjona ifampizaràntsika manaraka. Ny tanjona sy tambajotra vaovao 100Kin10 dia hanomboka amin'ny fararano 2022.